Imizekelo yokuPhuma kwiNjongo ezizivelelayo eziya kuphucula iireyithi zakho zokuguqulwa | Martech Zone
Imizekelo yokuPhuma kwiNjongo ezizivelelayo eziya kuphucula iireyithi zakho zokuguqulwa
NgoMvulo, Julayi 20, 2020 NgoLwesithathu, Matshi 30, 2022 Ugljesa Djuric
Ukuba uqhuba ishishini, uyazi ukuba ukutyhila iindlela ezintsha nezisebenzayo zokuphucula amaqondo okuguqula ngomnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu.
Mhlawumbi awuyiboni ngale ndlela ekuqaleni, kodwa ukuphuma kweenjongo-pop-ups kunokuba sisisombululo ngqo osikhangelayo.
Kutheni kunjalo kwaye kufuneka uyisebenzise njani kwangaphambili? Uya kufumanisa ngomzuzwana.
Zithini iiPop-up zeNjongo yokuPhuma?
Zininzi iintlobo zeefestile ezivelayo, kodwa ezi zezona zisetyenzisiweyo:
Ukungena kwezinto ezivelayo
Nganye kuzo ineengenelo zayo, kodwa ngoku siza kuchaza ukuba kutheni ii-pop-ups zenjongo yokuphuma zinamandla amakhulu ngokwenene okwenza ishishini lakho libe kumgangatho ophezulu wempumelelo.
Injongo yokuphuma I-pop-ups, njengoko igama lisitsho, iifestile ezibonakala xa undwendwe lufuna ukuphuma kwiwebhusayithi.
Ngaphambi nje kokuba umtyeleli akhombe kwiqhosha lokuvala ithebhu yesikhangeli okanye ifestile, iwindow ephumayo iyavela. Inikezela ngonikezelo olungenakuphikiswa oluthimba ingqalelo yondwendwe kwaye lubakhuthaze ukuba bathathe inyathelo.
Ezi pop-ups zisebenza ngokusekwe kwitekhnoloji ye-smart exit-injongo eqonda injongo yokuphuma kwaye ibangele ukuvela.
Kwaye kutheni zibaluleke kangaka?
Zibalulekile kuba unokuzisebenzisa ukunqanda ukuphulukana nomthengi olandelayo!
Ngokubonisa izibonelelo ezithile ezixabisekileyo, abantu banokuqala ukutshintsha iingqondo zabo kwaye bazalisekise injongo oyimisileyo.
Nokuba olo nikezelo lumalunga neendaba ezinomdla abanokuzifumana ngephulo lakho le-imeyile okanye isaphulelo sokuthenga kwangoko, ungazama kwaye uqinisekise abantu ukuba bayamkele.
Ewe kunjalo, kukho izinto ezithile ekufuneka uzenzile ezinje:
Isibonelelo esibekwe ngobuqili
Ukubandakanya i-CTA (iqhosha lokufowunela isenzo)
Oku kunokubonakala ngathi zizinto ezininzi onokucinga ngazo, kodwa siza kukubonisa iindlela ezilungileyo ekufuneka uzilandele kwaye uzisebenzise ngokungqinelana newebhusayithi yakho kunye neshishini lakho ngokubanzi.
Jonga i-Infographic: Yintoni injongo yokuPhuma?
Eyona ndlela ilungileyo yokuphuma kwabantu ekujoliswe kubo
Ukuze siqonde ngcono iindlela zokuphuma ezenziwayo zokuphuma, siya kuba nomfanekiso ngqondweni sisebenzisa imizekelo efanelekileyo evela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo eziyimpumelelo.
Umzekelo 1: Nika umxholo obalulekileyo
Ukunikezela ngesiqwenga somxholo kuhlala kungumbono olungileyo. Xa ulazi iqela ekujoliswe kulo, unokulungiselela umxholo onomdla kubo.
Oku kunokuba zezi:
Kuya kuba lula kuwe ukwenza umnikelo ongenakuthintelwa emva kokuba uphande kakuhle imidla yabantu ofuna ukubaguqulela kubathengi bemveliso okanye inkonzo yakho.
Ukutshintshiselana, bayakuvuyela ukushiya umnxeba wabo we-imeyile kuba "ixabiso liphantsi".
Emva kokuqokelela abafowunelwa kwaye ubongeze kuluhlu lwakho lokuposa, ungasasaza ulwazi ngebrand kwaye unxibelelane nabathengi bakho bexesha elizayo.
Kodwa ungalibali ukuba kufuneka ufezekise okulindelekileyo, kungenjalo, ababhalisile bakho baya kuphoxeka kwaye abasayi kubuya.
Babonise ukuba ukuthembela kuwe bekufanelekile ngokupheleleyo.
Nanku umzekelo ukusuka Ishedyuli:
Umxholo: Ishedyuli imisela iwindow yokuphuma apho iindwendwe zinokuqokelela khona umxholo obalulekileyo. Njengoko sibona, bakwakhankanye ngobuqili ukuba babonelela ngekhalenda kunye ne-e-ncwadi, kwaye kuya kufuneka ucofe Yifumane ngoku iqhosha lokuzifumana.
Design: Uyilo olulula, kodwa ngemibala eqaqambileyo etsala umdla. Imifanekiso engasentla kwesicatshulwa ibubungqina bokuba umxholo ubalindile, oko kukuthi, isiqinisekiso sabo.
Ikopi: Kunxibelelwano lwangoku, Phambi kokuba uhambe… inyanzelisa abantu ukuba bayeke kwaye bajike ngaphambi kokuba bemke, kwaye loo nto isetyenziswe ngobulumko kule pop-up pop-up nayo.
Umnikelo: Umrhumo ubonakala umema. Kuquka amagama iplani kwaye ukuququzelela kunceda ukudibanisa isithembiso esipheleleyo kunye nemveliso engcono kunye nokusebenza kwexesha.
Umzekelo 2: Nika iDemo ebukhoma
Idemo yindlela entle yokunxibelelana neendwendwe zakho.
Mhlawumbi iqonga lakho libonakala linzima kwaye seso sizathu sokuba undwendwe lufuna ukuphuma kwiwebhusayithi yakho.
Ukuba unika inkonzo ethile, uya kuba nakho ukucacisa ngokulula ukuba kufuneka isetyenziswe njani, ziziphi izibonelelo kwaye iyafana.
Idemo ephilayo lolona khetho lubhetele kuba yonke into yenzeka ngexesha lokwenyani kwaye abathengi abanokubona lonke uhlaziyo kunye neendaba.
Jonga njani Zendesk basebenzise oku kwiwindows-pop-up pop-up enenjongo:
Umxholo: Njengoko iZendesk sisoftware yokuxhasa abathengi itikiti, le pop-up yindlela elungileyo yokuzibandakanya kubathengi abanokubakho kwaye uqalise unxibelelwano.
Design: Into yabantu ifakiwe, enceda abantu ukuba banxibelelane neshishini lakho.
Umnikelo: Idemo sisibonelelo esikhulu kuba eli qonga lithembisa isisombululo esiza kukunceda ekusebenzeni kweshishini lakho ngcono. Kwaye, okona kubaluleke kakhulu, isithembiso sabo siqala ukuzaliseka ngalo mzuzu, uqala ukufumana uncedo kwangoko.
Ikopi: Le kopi inethoni efudumeleyo efanelekileyo ekwakheni unxibelelwano olomeleleyo kunye nabathengi. Kwelinye icala, ukuba unamaphepha athile Ingaphantsi kwentsebenzo, awudingi ukuba ulinde ukuwagqiba ukuze uqale ukufumana abathengi kunye nokukhokelela kuwo.
Unako ukubeka iipopu zakho kwifayile kuza ngokukhawuleza amaphepha kwaye uqalise ukuvuselela intengiso yakho.
Umzekelo 3: Chaza ukuThunyelwa simahla
Ukuhanjiswa simahla kuvakala njengebinzana lomlingo lomntu ofuna ukuthenga kuwe.
Kuya kufuneka uyazi ukuba abantu abathandi ukuhlawula iindleko zecala. Banokuhlawula ngakumbi into kunokubhatala enye imali yokuhambisa ngenqanawa.
Ukuba awukwazi ukunciphisa iindleko zokuhambisa, kungcono ukuzibandakanya kwixabiso elisisiseko kunokubeka kwivenkile yakho ngokwahlukeneyo.
Nangona kunjalo, ukuba uyakwazi ukubonelela abathengi bakho ngenqanawe yasimahla, kuya kufuneka uyenze. Ukuthengisa kwakho kuya kuqala ukwanda ngexesha elifutshane kakhulu.
Nanku umzekelo ukusuka IBrooklinen:
Umxholo: I-Brooklinen yinkampani ethengisa amashiti, ke ayothusi into yokuba sikwazi ukubona amanye amabhedi amnandi ebhedini kwindawo yokuphuma.
Design: Imvelaphi emhlophe, iifonti ezimnyama. Kodwa, ngaba ilula ngenene? Iifayile kumfanekiso ongemva ngokuqinisekileyo zijongeka njalo ngenjongo. Bajongeka ngathi umntu uphakame nje ebhedini ethambileyo. Kufana nokuzama ukusihenda ukuba sithenge la maphepha mahle, ngokuqinisekileyo ayalingayo, ngakumbi ukuba sele uziva udiniwe xa le pop-up ibonisa.
Umnikelo: Unikelo ngokuqinisekileyo lucacile ngokwaneleyo kwaye lusebenza kakhulu.
Ikopi: Akukho magama angenamsebenzi, ikopi ecocekileyo necacileyo.
Umzekelo 4: Biza abantu ukuba babhalise kwincwadana
Incwadana yeendaba luhlobo lomxholo oxabisekileyo, ngakumbi ukuba wenza into entle apho abantu banokwaziswa malunga nezinto ezibalulekileyo kwaye bangaziva ngathi bayatyhalwa ukuba bathenge into kuwe.
Ikuvumela ukuba uhlale uqhagamshele kubathengi bakho.
Ukuqhutywa kwemikhankaso yeendaba kuthetha ukuba kuya kufuneka ungaguquguquki ukuze bazi ngokuthe ngqo ukuba banokulindela nini ulwazi olutsha kuwe.
Nantsi indlela GQ kumiliselwe oku kwabo iwindow pop-up:
Umxholo: I-GQ yiphephancwadi lamadoda eligubungela indlela yokuphila, ifashoni, uhambo kunye nokunye.
Design: Kwakhona, into yabantu ifakiwe. Ukuhlekisa okuncinci emfanekisweni kunye nayo yonke into ephumayo ilula kakhulu, eyenza indibaniselwano enkulu.
Umnikelo: Banikezela ngeengcebiso kunye namacebo anokunceda amadoda ukuba abonakale emhle, kwaye ekuphela kwento ekufuneka bayenzile kukushiya unxibelelwano lwabo.
Ikopi: Elona candelo libalulekileyo libonakalisiwe, ke abatyeleli akufuneki nokuba bafunde nantoni na ngaphandle kwesicatshulwa esibhalwe kwifonti enkulu, njengoko inika ulwazi olwaneleyo.
Umzekelo 5: Nika isaphulelo
Izaphulelo zihlala zikhuthaza. Xa ubongeza ekuphumeni-ngenjongo yokuzivelela, banokuba nefuthe elikhulu kwingeniso yakho.
Indlela esiya kuba siphezulu ngayo isaphulelo, kuxhomekeke kuwe kuphela. Nokuba inkuthazo encinci inokulonyusa kakhulu inani lokuthengisa.
Ezinye iivenkile zibonelela ngezaphulelo rhoqo kuba kuye kwavela into elungileyo.
Nezona ndawo zidumileyo ze-e-commerce zisebenzisa izaphulelo zokuphuma njengendlela yokutsala umdla wabatyeleli. Nanku umzekelo osuka kwindawo apho unako thenga iilokhwe kwi-intanethi, unikezelo luyi-15% isaphulelo ukuba ubhalisela ukuthengisa kwabo nge-imeyile.
Umxholo: I-revolve yiwebhusayithi yengubo enokhetho olukhulu lweemveliso, ke ukubonelela ngesaphulelo kunokukhuthaza abantu ukuba bathenge ngakumbi ngenjongo yokugcina imali.
Design: Siyabona ukuba ukongeza into yomntu yinto eqhelekileyo. Le pop-up inoyilo lodidi olunamaqhosha e-CTA eyahlukileyo.
Umnikelo: Banikezela ngesaphulelo se-10% kwaye bancede ukuba ugcine ixesha elithile ngokukhetha enye yezi ndidi zintathu.
Ikopi: Idilesi ngqo yindlela enamandla yokutsala umdla wabathengi.
Njengoko ubona, zininzi izimvo malunga nokuba ungazisebenzisa njani iindlela zokuphuma ngenjongo yokufumana inzuzo kunye nokwakha ukuthembela kubathengi bakho.
Ungadlala uyilo, ikopi, kwaye ubandakanye izibonelelo ezahlukeneyo eziza kuthi zithathe ingqalelo yeendwendwe zakho kwaye zonyuse uguquko lwakho.
Ngokuqinisekileyo ngumzamo omncinci xa kuthelekiswa nento enokwenziwa lolu hlobo lwe-pop-up kwishishini lakho.
Yikholwe okanye ungakholelwa, ukuyisebenzisa kunokuba lula ngakumbi kuba namhlanje kukho izixhobo ezinokukunceda ukuba wenze i-pop-ups esebenzayo kwimizuzu engaphantsi kwesi-5.
Zininzi izixhobo ezinje nge Privy kunye 'nezinye iindlela eya kukunceda ukuba wenze iwebhusayithi yakho ezivelelayo. Ngokudonsa kwaye ulahle umhleli kunye neenketho zokwenza ngokwezifiso, pop-ups ezimangalisayo ziya kuba zilungele ukuphunyezwa.
Sebenzisa ezi zinto xa usenza i-pop-up kwaye ubone ukuba yeyiphi eguqula eyona ilungileyo kwimeko yakho!
tags: umnxebacofa popupinqanaba lotshintshoukungena okuphumayopopup yokungenainjongo yokuphumaPhuma ngenjongo yokuzivelelaukuphuma-ngenjongo yokungenauyilo oluzivelelayopop-up umnikelookupoqayounikezelo popupskrolela okuzivelelayoiscroll popupixesha elivelileyoixesha elivelayo
Ugi yi-CEO kunye noMsunguli Umxholo wehashe Iarhente yentengiso apho inceda iinkampani ze-B2B SaaS ukuba zikhawuleze zibekwe kuGoogle ngeendlela ezinamandla zokuthengisa umxholo. Unomdla wokukhula kwe-SaaS, ukusela ibhiya, ukuhambahamba ngeenja zakhe ze-2 zeDalmatia kunye namahashe akhwele.
I-Chili Piper: Inkqubo yokuCwangciswa okuzenzekelayo yokuGuquka kweNkokeli